प्लस टु प्रेम: अफेयर र ब्रेकअप | EuropeNepal.Net
प्लस टु प्रेम: अफेयर र ब्रेकअप
Europe Nepal Tuesday, June 3, 2014
Love affair and break up in plus2lavel students in Kathmandu.College gets himselfagirlfriend making them proud of their homeland was responsible .
बसुन्धारका सन्देश (नाम परिवर्तन) ले भर्खर ट्रिनिटी कलेजबाट कक्षा १२ को परिक्षा सके। कक्षा ११ र १२ पढ्दा उनको तीन जनासँग प्रेम सम्बन्ध गाँसियो र छुट्यो पनि। पहिलो प्रेम सम्बन्ध कक्षा ११ को सुरुवातमै गाँसियो। भर्खर कलेज पढ्न गएका सन्देशलाई आफ्नै कक्षाकी एउटी केटी असाध्यै मन पर्‍यो। उसले जे गरेपनि राम्रो लाग्न थाल्यो। सन्देश आफूलाई मन पर्ने केटीको अलि धेरै नै ख्याल राख्न थाले। केटी साथीलाई भेटेको एक महिनामै उनले प्रेम प्रस्ताव राखिहाले। उही उमेरका दुइ जनाबीच प्रेम सम्बन्ध जोडीन कति नै समय लाग्थ्यो र? केहि दिनको घुमघाम पछि दुइ बीचमा खटपट सुरु भयो। करिब पाँच महिनामा उनको पहिलो प्रेम टुट्यो। कलेज पुगेपछि आफूलाई जिम्मेवार ठानेका उनलाई गर्लफ्रेन्ड बनाउँदा गर्वको अनुभूति भएको थियो। 'साथीहरुको अगाडी राम्री केटीलाई पट्याउँदा बेग्लै सान हुन्छ' उनी भन्छन्, 'केटाहरुमा कसले राम्री केटी पट्याउने भन्ने कम्पिटिशन नै हुन्छ।' पहिलो गर्लफ्रेन्डसँग ब्रेकअप भएको एक महिनामै उनको अर्की केटीसँग अफेयर चल्यो। अहिले उनलाई ब्रेकअप र प्याचअप सामान्य जस्तै लाग्छ। 'पहिलो गर्लफ्रेन्डसँग ब्रेकअप हुँदा एकदम नराम्रो लागेको थियो' उनी भन्छन्, 'सुरु सुरुमा माया लागेपनि पछि धेरै झगडा पर्न थाल्यो सानो सानो कुरामा झगडा हुँदा हुँदै ब्रकेअप भयो।' सामान्य रुपमा नै उनका तीन प्रेम सम्बन्ध गाँसियो पनि र तोडियो पनि।
His first love was lost for about five months . College gets himselfagirlfriend making them proud of their homeland was responsible . ' Good Girl patyaumda different San forward to friends ' he says , ' typologies beautiful girl who is the wisest that the competitions . " The beginning of the first garlaphrendasamga breakup was another affair lasted one month his . Now they feel like the breakup and pyacaapa normal . " It was bad enough when the first garlaphrendasamga breakup ' he says , ' At first love after many conflicts began squeezing the small things so, brakeapa fight was . ' General as the love of his three revoluation also and even broken .
सेन्ट जेभियर्स कलेजमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत सलोनी (नाम परिवर्तन) र राज (नाम परिवर्तन) कलेजको पहिलो दिन साथी बने। दुवै जना किताब, नोट पढ्ने लेख्ने गर्थे मित्रता गाँसिएको एक महिनामा नै उनीहरुको प्रेम सम्बन्ध सुरु भयो। भर्खर १७ वर्षका यी दुइलाई एक अर्कालाई भेट्न नपाउँदा छटपटी हुन्छ। स्कूल सकेपछि हातमा मोबाइल बोक्न पाएका सलोनी र राज राती घन्टौं फोनमा कुरा गर्छन्। कलेज छुट्टि भइसकेपछि पनि छिट्टै घर जान मन लाग्दैन उनीहरुलाई। घरमा थाहा पाउलान कि भन्ने डर हुँदा हुँदै पनि झुठ बोलेर छुट्टिका दिनमा घुम्न जान्छन्। कुनै पर्व वा अवसर आउनासाथ एक अर्कालाई उपहार दिन हतार हुन्छ। कलेज नजिकैको चिया पसलमा भेटिएकी सलोनी भन्छिन्, 'कहिलेकाहीँ झगडा पनि पर्छ तर माया धेरै लाग्छ, फ्युचर त केहि सोचेको छैन तर अहिले राज नै माया गर्छु।'
काठमाडौंमा बाटोमा हिँड्दा, पार्कमा होस वा सवारी साधनको यात्रामा होस् कलेजको पोषाकमा हात समाउँदै हिँड्ने प्रेम जोडी देखिनु समान्य कुरा हो। कक्षा दशसम्म स्कूलको कडा अनुशासनमा बसेर पढेका विद्यर्थी कलेज प्रवेश गर्नासाथ आफूलाई खुला आकाशमा उँड्ने पंक्षी जस्तै ठान्छन्। यो उमेरमा प्रेमी प्रेमीका बनाउनु, साथीहरुलाई आफ्नो प्रेम कहानी सुनाउँदा उनीहरुलाई रमाइलो लाग्छ।
तर कलेजमा पनि प्रेम सम्बन्ध गाँस्न सजिलो त कहाँ छ र? पोषाक, समय सिमा, हाजिर जस्ता नियमले कलेजभित्रै प्रेम सम्बन्ध गाँस्नेलाई अप्ठ्यारो बनाइ दिएको छ। कतिपय कलेजमा प्रवेश गर्ने समयमा झोला समेत जाँच गरिन्छ। तर यस्ता नियमले प्रेमलाई रोक्न सक्दैन भन्ने कुरा तर शहरभरी किशोरावस्थामै जोडी बाँधेर हिँड्ने कलेजका विद्यार्थीबाट प्रष्ट हुन्‍छ।
EuropeNepal.Net: प्लस टु प्रेम: अफेयर र ब्रेकअप